YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, October 17
ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာမှာ အလွန်ပင်ကြောက်စရာဖြစ်ပါသည် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်သည့် ဖြည့်စွတ်ပြောရမည့်ဆိုပါက*** ကျားမ မရွေး မျိုးပွားခြင်းလည်း ထိခိုက်နိုင်ကြောင့် ***အသိပေးအပ်ပါသည် ။
Mg Mandalay >
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/17/2012 1 အကြံပြုခြင်း
သစ္စာဖောက်ဟု မထောက်မညှာ ပြုမိပါလျှင်
အသင်တို့၏ မညွှတ်ပြောင်းသော ခွပ်ဒေါင်းလက်ဖြင့်
ပေးဆပ်ရလည်း လူ့ဘုံလမ်းခွဲ ၀မ်းမနည်းဘဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/17/20120အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂျော်နီ၊ ပဒိုရောဂျာခင်၊ ပဒိုဒေးဗစ်ထော (ဓါတ်ပုံ KNU)
ယခုကဲ့သို့ အရေးပေါ် ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းဝေး ကျင်းပရခြင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဘားအံမြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟို ဆက်သွယ်ရေးရုံး ဖွင့်ပွဲ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ဗဟို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့တို့အကြား သဘောထား တင်းမာမှု ဖြစ်ခဲ့ရာက စတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး၌ KNU ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် သုံးဦး ဖြစ်သည့် KNLA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး၊ အတွင်း ရေးမှူး (၂) စောဒေးဗစ်ထော၊ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ဌာန တာဝန်ခံ ပဒို ရောဂျာခင်တို့အား အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ် လိုက်ပါသည်။
ဤကိစ္စကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုးသည် မိမိ၏ လုပ်ရပ် မှန်ကန်သည်ဟု သက်သေပြရန် မြဝတီ မြို့၌ သတင်း စာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် ပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကရင်ပြည်သူ တို့၏ ၀ိုင်းဝန်း ဖိအားပေးမှု ကြောင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အရေးပေါ်ဗဟို ကော်မီတီ ခေါ်ယူရေး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဤဗဟို ကော်မီတီ အစည်းအဝေးမှ ကေအဲန်ယူ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် ကျင်းပ နိုင်ရေးကို အဆိုပြု ကြမည်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုပါသည်။ KNU အဖွဲ့ထဲတွင် လက်ရှိ၌ ဗဟိုကော်မီတီ (၃၀) ဦး အရန် ဗဟို ကော်မီတီ (၁၅) ဦးနှင့် ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မီတီ (၁၁) ဦး ရှိပါသည်။ KNU တွင် တပ်မဟာ (၇) ခု ရှိပြီး တပ်မ ဟာ (၂) နှင့် တပ်မဟာ (၅) တို့မှာ အတွင်းရေးမှူးတို့ အဖွဲ့အား ထောက်ခံကြပြီး တပ်မဟာ (၁) (၃) (၄) (၆) (၇) မှာ စစ်ဦးစီးချုပ်အား ထောက်ခံသည့် အင်အားစုများ ဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်တွင်း သတင်းများက ဆိုပါသည်။
KNU မှ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၃ ဦး ထုတ်ပယ်ခြင်း သည် နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု ဟု ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် ဆို KNU ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမတိုင်မီ တစ်ပတ်ခန့်အလိုတွင် ဗဟိုေ ကာ် မ တီဝင် ၃ ဦးအား ထုတ်ပယ်ပစ်ခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံမှုဟု ယူဆနိုင်ကြောင်း မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ငြိမ်း ချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာ တွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ရှိလာပြီး အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့က ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူထူးစောဖိုး၊ ဗဟိုတရားရေးတာ ဝန်ခံ ပဒိုဒေးဗစ်ထောနှင့် လူမှုဝန် ထမ်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာနတာဝန်ခံ ပဒိုရောဂျာခင်တို့အား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။
“ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး က အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့၊ သူတို့အမိန့်ထုတ်တာ အောက်တို ဘာလ ၂ ရက်နေ့၊ ကပ်ပြီးတော့ လုပ်တာ ဆိုတော့ နောက်ကွယ်မှာ ဒါ သူတို့ရည်ရွယ်ချက် ရှိရင်လည်း ရှိနိုင် မှာပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ခန့်မှန်းကြည့် ပေါ့။ ဟို ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး က နောင်လာမယ့် ၆ လ၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်လာမယ့် ၃ လမှဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက တစ်ပတ် လောက်အလိုမှာ ထုတ်လိုက်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒါအများကြီး လက်မခံနိုင်စရာပေါ့။ ဒီကိစ္စကို ဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးမှာ ရှင်းလို့ရတယ်။ ရှင်းလို့ ရရဲ့သားနဲ့ ဒီဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို တက်လို့မရအောင် ဒါသက်သက် ကန့်လိုက်တာ၊ နိုင်ငံ ရေးအရ ဒါနိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံ တာပဲ”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
နှစ်ပေါင်း များစွာ လက်တွဲလာ ခဲ့သော KNUခေါင်းဆောင်များ ကြားသဘောထားကွဲလွဲမှု၏ အခြေ ခံအကြောင်းရင်းမှာ ကရင်အမျိုး သား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ ဦးစီး၍ မြို့ကြီးများတွင်ဆက်ဆံရေးရုံး များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းအပေါ် အမြင်မတူ ကြခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်ဟု ပဒိုမန်း ငြိမ်းမောင်က ပြောသည်။
”နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ပဋိပက္ခ ဒါဟာ နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခ၊ တပ်ပြဿနာဆို တော့ ကျွန်တော်တို့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဘားအံ မှာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးတော့ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေဖွင့်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့တာ ရှိတယ်။ ဒီလို ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်ဖက်တပ်မတော်တွေဟာ ဆက်ဆံ ရေးရှိခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးတော့ နား လည်မှုရှိလာမယ်။ အမျိုးသားပြန် လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ပိုအထောက် အကူဖြစ်စေမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ ဒါ အဓိကပေါ့ နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာ တချို့ကလည်း ဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာကို အရင်ရှင်း ဖို့လိုတယ်။ အရင်ရှင်းပြီးမှ ဆက် ဆံရေးရုံးတွေဖွင့်သင့်တယ်လို့ ဒါ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ လက်ခံထားတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်”ဟု ၄င်းက ပြော သည်။
ထိုသို့ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်အား KNLA တပ်မဟာနှစ်ခုသာ ထောက်ခံ ပြီး တပ်မဟာတစ်ခုက ကြားနေအဖြစ် သဘောထားပြီး တပ်မဟာလေးခု ကမူ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်မခံ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ KNUခေါင်းဆောင်များကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေး နွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်ရန် အတွက် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နှစ်ဖက်ဗဟိုကော်မတီဝင်အချို့ တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး ယခုလ တတိယပတ်တွင် KNU လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ် နေရာတွင် ဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာ စုံညီအစည်းအဝေး ကျင်းပသွားမည် ဟု ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒို မန်းငြိမ်း မောင်က အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့၌ ပေါ် ပြူလာနယူးစ်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြော ကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ KNUခေါင်းဆောင်များကြား သဘောထား ကွဲလွဲရသည့် အကြောင်းအရင်း အပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် နိုင်ငံရေးအင်အားစု အချို့နှင့် KNU ဗဟို ကော်မတီဝင် အချို့ကမူ ကွဲပြားစွာရှုမြင်ကြသည်။
”မှန်တော့မှန်တယ်၊ နှစ်ဖက် စလုံး (KNU တွင်း သဘောထား ကွဲလွဲသည့် ခေါင်းဆောင်များ)က ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ချင်ကြ တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ဖြည်း ဖြည်း၊ တစ်ဖက်ကမြန်မြန်၊ အရှိန် မတူတဲ့အပေါ် အမြင်ကွဲလွဲတာ စဉ်း စားကြည့်ရင် တပ်မတော် အချင်းချင်း လက် တွဲပြီး ကောင်းစား၊ ပြည်သူတွေ က အရင်အတိုင်းဆိုတဲ့ ပုံစံကို ကျွန်တော်လည်း လက်မခံဘူး”ဟု KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၃ ဦးအားထုတ်ပယ်ပြီးနောက် အောက် တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော KNU ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး သို့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၇ ဦးသာ တက်ရောက်ရာ အစည်းအဝေး အထမမြောက်ခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟို ကော်မတီ ၄၈ ဦးရှိရာ အနည်းဆုံး ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း တက်ရောက်မှသာ အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် စစ်ဦးစီးချုပ်မှာ အလိုအလျောက် ဗဟိုကော်မတီဝင် ဖြစ်ပြီး KNU ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအရ ၄င်းကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်မှု မပြုနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ သဘောထားကွဲလွဲ မှုများရှိနေသော်လည်း KNU သည် အများက ထင်မြင်ထားသလို ပြိုကွဲ သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက်နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် KNU ဗဟိုကော် မတီဝင်အချို့က ယူဆထားသည်။
”KNU ဟာ တော်လှန်ရေးနဲ့ ခွဲလို့မရဘူး။ KNU ပြိုလဲရင် တော် လှန်ရေးပြိုလဲတာပဲ။ သူတို့ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်လာ ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ပဋိပက္ခ တွေ သဘောထားကွဲလွဲတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြို လဲခဲ့ဘူး။ ဒီတစ်ခါ လည်း အောင် အောင်မြင်မြင် နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော် အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါ တယ်”ဟု NLD(LA) မှ ကိုထွန်း အောင်ကျော်က ဆိုသည်။ ထို့အတူ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ ABSDF စသောနိုင်ငံ ရေးအင်အားစု များမှ တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်း KNU ပြိုကွဲ မသွားဟု ယုံကြည် ထားသည်။
ထို့အတူ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က လည်း ယခုကိစ္စရပ်သည် ၄င်းတို့ KNU အတွက် ဖြေရှင်းမရနိုင် လောက်သည့် အခက်အခဲဟု ရှုမြင် မထားကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးဟာ နှစ်ပေါင်း ၆၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း ၆၃ နှစ်ခရီးမှာ အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်၊ ရန်သူ အဆက်ဆက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ လည်း ဒီတော်လှန်ရေးအလှည့်အပြောင်း အကျပ်အတည်းမှာ သဘော ထား ကွဲလွဲခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ လို သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကို ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိတယ်။ ဒီအခု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကြိုး စားမယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျော်ရဲလင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံ
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃း၃၀ မှ ၄း၃၀ နာရီအထိ နေပြည်တော်ရှိ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးသိန်းဋ္ဌေးအား ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များမှကျင်းပသော နေ့လည်စာစားပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မစ္စတာ အိုဘားမား၏ အထူးလက်ထောက် Ms. Samantha Powerနှင့်အဖွဲ့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး မိုက်ကယ်ပေါ့စနာနှင့်အဖွဲ့၊ မြန်မာပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲ ဦးဆောင်သော ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဗိုဟ်ချုပ်ကြီး Francis J. Wiercinski နှင့်အဖွဲ့ အစရှိသည်တို့နှင့် အတူလိုက်ပါလာကြသော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များမှ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း 12:30 မှ 1:30 အထိနေပြည်တော်ရှိ Auriun Palace Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော နေ့လည်စာစားပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ရစဉ် (17-10-2012)
အိုဘားမား၏ အထူးလက်ထောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မစ္စတာ အိုဘားမား၏ အထူးလက်ထောက် Ms. Samantha Powerနှင့်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့နံနက် 10:00 မှ 10:45 အထိ နေပြည်တော်ရှိ Auriun Palace Hotel တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက် ဆွေးနွေးခဲ့စဉ် (17-10-2012)
မိုက်ကယ်ပေါ့စနာနှင့်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး မိုက်ကယ်ပေါ့စနာနှင့်အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့နံနက် 11:45 မှ 12:15 အထိ နေပြည်တော်ရှိ Auriun Palace Hotel တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက် ဆွေးနွေးခဲ့စဉ် (17-10-2012)
အမေရိကန် ဗိုဟ်ချုပ်ကြီး Francis J. Wiercinski နှင့် အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်
မြန်မာပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲ ဦးဆောင်၍ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဗိုဟ်ချုပ်ကြီး Francis J. Wiercinski နှင့် အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့နံနက် 10:45 မှ 11:30 အထိ နေပြည်တော်ရှိ Auriun Palace Hotel တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက် ဆွေးနွေးခဲ့စဉ် (17-10-2012)
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံ ကိန်းနှင့်မုံရွာမြို့ရှိ ကြေးနီစီမံကိန်းအားဖျက်သိမ်းသွားမည်မပာုတ်ဟုတရုတ်သံအမတ် ပြော
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်မပာုတ်ကြောင်း ကတိပြုထားသည့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံ ကိန်းနှင့် ပြည်သူလူထုကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မုံရွာမြို့ရှိ ကြေးနီစီမံကိန်းအား မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မှ ဖျက်သိမ်းသွားမည်မပာုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ လီကျင်းဝှာက ပြောကြားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကို မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက်နှင့် Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd တို့မှ အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေခံစားသည့်ပုံစံဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းစီမံကိန်းကြောင့် ရွာများပြောင်းရွှေ့ရခြင်း၊ ဒေသခံတို့၏လယ်ယာမြေများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏
ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများမှ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကဲ့သို့ ကန့် ကွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင် ပြည်သူလူထုမှ တခဲနက် ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ၎င်း၏လက်ထက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်မပာုတ်ကြောင်း ၂၀၁၂ မေလက ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့် ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလီကို နှစ်ပေါင်း -၂၀-ကူညီနေတဲ့-AZG- ကို စစ်တွေသားတို့ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ခွင့်မပြု
၁၇.၁၀.၂၀၁၂ ရက် နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီပတ်ဝန်ကျင်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ
မြို့မိ မြို့ဖများ၊ ရခိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီသီများနှင့် ရခိုင်
လူငယ်များမှ စုဝေးပြီး AZG/MSF အဖွဲ့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတခုကို
ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၈.၁၀.၂၀၁၂ ရက် မနက် ၉း၀၀
နာရီတွင် စစ်တွေမြို့ ၊ မိဇံရပ်ကွက် ၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် ရှုခင်းသာအမည်ဖြင့်
အခမဲ့ ဆေးခန်းတခုကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင့် မြို့ပေါ်ရှိ
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့ပေါ်ရှိ ဂုဏ်သရေရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊
ရဟန်သံင်္ဃာတော်များကို ဖိတ်ကြားထားပါသည်။ ထိုဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်
ကိစ္စဖြင့် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ လူထုမှ သက်သေအထောက်အထားများကို
စုစည်းခဲ့ကြပါပြီး မသင်္ကာဖွယ်ရာ အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု
အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင် လူငယ်တယောက်မှ RSV ကို
ပြောပြခဲ့ပါသည်။ “ဥပမာဗျာ - သူတို့က သဘောမရိုးဘူးဆိုတာကို အစကတည်းက
ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက ဘင်္ဂလီတွေအတွက်ပဲ သူတို့
လာတာပါ။ အခမဲ့ဆေးခန်းတွေဖွင့်တယ်။ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကိုပဲ
အဓိကဆေးကုသပေးခဲ့တယ်။ ဖွင့်တဲ့နေရာတွေကလည်း ဘင်္ဂလီတွေနေတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ
ဖွင့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ သူတို့
ဒီဘင်္ဂလီကို ရိုဟင်ဂျာဖြစ်အောင် အဓိက အထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အဓိက သူတို့က အဓိက
နေရာက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ OIC ကိစ္စကို
အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်နေချိန်တွင် AZG အဖွဲ့အစည်းသည် ကုလားတွေဆီမှ
အထောက်အပံ့များကို အဓိက ယူထားသဖြင့် OIC နှင့် ပတ်သတ်မှုရှိလိမ်မည်လို့
မြို့လူထုမှ သံသယဖြစ်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆက်လက်၍ “သူတို့ အခုလုပ်မယ်
ဆေးခန်းကလည်း ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာ။ သူတို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်လူထုကို
တခုခုတော့ ချပြသင့်ပါတယ်။ ဒါက ဘယ်လိုဘာကြောင်းလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့၊
အခုက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ငါတို့ ကြိုက်သလို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့
ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်”လို့ ခေါင်းဆောင်လူငယ် ပြောပြသွားပါတယ်။ ယခုအခါ AZG
အဖွဲ့မှ ရခိုင်ပြည်တွင် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ လောက်ထိ
ရှိတယ်ဆိုပြီး သတင်းလွင့်ထားကာ ထိုဝေဒရှင်များအား ဆေးကုသနိုင်ရန်အတွက်
ဒီဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ရတာပါ သတင်းလွင့်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း
ရခိုင်လူထုက ပြည်သူလူထုယုံကြည်သော ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (သို့) အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှ တဆင့်လှူလျှင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်
ဆေးခန်းဖွင့်ခြင်းကိုမူ လက်မခံနိုင်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်
၁၈.၁၀.၂၀၁၂ ရက် မနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် မိဇံရပ်ကွက် ၊ လေညှင်းသာတွင်
လူစုဝေးလျှက် AZG ကန့်ကွက်ပွဲကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ၄င်းခေါင်းဆောင်
လူငယ်မှ RSV ကို ပြောပြသွားပါသည်။ ထိုလူငယ်မှပဲ သူတို့သည် AZG နှင့်
ပတ်သတ်ပြီး စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများ စုဆောင်းရရှိထားပါသည်ဟုလည်း
( ဆန္ဒပြကြမည့် သတင်းကို ဤအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် )
ဤသတင်းက စစ်တွေမှာ ကုလားကို နှစ်ပေါင်း-၂၀-ကျော် အကူအညီ ပေးခဲ့ သော
-AZG- ကို ဆန္ဒပြကြမည့်သတင်းဖြစ်သည် ။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် သူတို့ တွေ
ဆေးခန်းဖွင်လှစ်ရန် အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်
ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌါနတို့ တွင် လုံးဝ တာဝန်ရှိသည် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသည် ဤကဲ့ သို့ 
ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရန် သင့်၏ မသင့်၏ကို ဘာကြောင့်များ မစဉ်းစားခဲ့ သနည်း ။
၀န်ကြီးချုပ်သည်လည်း ဘာကြောင့်များ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်လေသနည်း ။
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည်လည်း ဘာကြောင့်များ ခွင့်ပြုချက် ပြုလုပ်ရလေသနည်း ။
ဤသို့ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် ပါတ်သက်၍ နာမည်ကြီးနေသော ဤအဖွဲ့ သည်
အတိတ်မကောင်းခဲ့ သည်ကို လူတိုင်းမျက်မြင်သိရှိကြပြီးဖြစ်သည် ။ AZG-မှ
ရှေ့ နေ ဦးကျော်လှအောင်ကို ပြန်လည်၍ လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းသည် အပြစ်မရှိ၍
လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းမဟုတ် ။ AZG သည် ကုလားတို့ နှင့် ပါတ်သက်နေသောကြောင့်
ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ယခုထိလည်း သံသယရှိနေရသော အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည်
။ သူတို့ အား စစ်တွေမြို့ တွင် အသိအမှတ် ပြုကာ ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးမည်ကို
စစ်တွေမြို့ ခံ လူထုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်လျှင် စောစီးစွာ
သိရှိကြရမည်ဖြစ်သည် ။ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ
၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်သည် အနာဟောင်းများကို ဆွပြီး
ပြုလုပ်နေသည့်အလားဖြစ်နေသည် ။ အစိုးရသည်လည်း ဤကဲ့ သို့ 
ပြုလုပ်နေခြင်းမှာ ရွံစရာကြီးဖြစ်နေသည် ။
အသုံးမကျလှသော အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားစနစ်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့်
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရသည်၎င်း ။ နိုင်ငံတော်အစိုးးရသည်၎င်း
မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြစေရန်
အကြောင်း မဖန်တီးသင့်ပေ ။ ယခုကဲ့ သို့လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြစေခြင်းသည်
အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား တခုလုံးကို ထိခိုက်စေသည်ဆိုခြင်းကို နားမလည်ကြသေးဟု
ထင်သည် ။ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြလျှင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၊
အစိုးရအရာထမ်းအမှူထမ်း ၊ တောင်သူလယ်သမား များနှင့် လူထုလူတန်းစား
ပါဝင်ကြသည် ။ သူတို့ တွေ ပါဝင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ အရင်းအမြစ်များ
မည်မျှ ဆုံးရှုံးနစ်နာရသည်ကို တွက်ချက်ကြည့်နိုင်သည် ။
နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်ရှိမှန်းမသိသော နိုင်ငံ ၊ ပုလိပ်ရှိမှန်း
မသိသော နိုင်ငံဖြစ်အောင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာ ကြိုးစားနေကြသည် ။
ယခုကား နိုင်ငံတော်အစိုးရသည်၎င်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရသည်၎င်း
ပြည်သူတရပ်လုံးအား လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြရအောင် ဆွဲခေါ်ပေးနေသူများဖြစ်နေသည်
။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် ပါတ်သက်၍
မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမျှ မပြုလုပ်ရန် အစိုးရက သတိပြုထားရမည်ဖြစ်သည် ။
အနည်းဆုံး ရပ်ကွက်ကျေးရွာအတွင်းမှာပင် စတုဒီသာ မုန်
့လက်ဆောင်းအလှူပွဲမျိုးတောင် မပြုမိလုပ်ဖို့အရေးကြီးသည့်အချိန်ဖြစ်သည်
။ ပြသနာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်နေပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်နေသာ လူသတ်ပွဲကြီး
ဖြစ်ပွါးနေသည့် လူမျိုးတွေအကြားမှာ ချစ်စကိုရှည်စေ မုန်းစကိုတိုစေဖို့ 
ခပ်ခွါခွါလေး ရှိနေစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုသည် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ
၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်အနေဖြင့် မည်သည်နည်းနှင့်မျှ မပြုလုပ်စေဖို
့ယခုကဲ့ သို့ -AZG- ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စကို ချက်ချင်း ရပ်တန်
ကျွန်တော့်တွက်ချက်မှု မမှားဘူးဆိုရင် မကာအိုမလည်းဆက်တက်သွားရင်တောင် 16,777,216 ကျရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ်။
16,777,216 = 24 bit memory allocation
16,777,216 ဆိုတာ Flickr မှာ အများဆုံး view count ပါ။ သူ့ထက်များတဲ့ view count မရှိပါဘူး။ ရှိလာမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ အားလုံးပဲ miss macau ကျော်သွားမှာကို စိတ်မပူပါနဲ့တော့။
ကျွန်တော်လည်း missinterphoto ကို miss myanmar အရင်ပြည့်တဲ့အကြောင်းရယ် favorite လဲ ပိုများတဲ့အကြောင်းရယ် ဒီအကြောင်းရယ် ခဏနေရင် Mail ပို့မှာပါ။
ပုံကို သွားပြီးရင် Favorite လုပ်ကြပါ။ view count တူနေရင် favorite ကို ကြည့်အောင် ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘေးက ပုံထဲမှာ ဓာတ်ပုံရဲ့ အပေါ်မှာ ကြယ်နဲ့ Favorite ခလုတ် ရှိတယ်လေ အဲဒါကို နှိပ်ပြီးလုပ်ရတာ။
အပေါ်က ဘယ်ဖက်ထောင့်မှာ star ပုံလေးကို နှိပ်လိုက် ပန်းရောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ အကောင့်အရင်ဖွင့်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။
Ko Ye မြန်မာမယ်လေးအတွက် စိတ်ပူနေသောမိတ်ဆွေများ စိတ်အေးစေရန် အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်. ကျွန်တော် Professional IT သမားတော့မဟုတ်ပါဘူး. အခုရပ်နေတဲ့ view count number - 16,777,216 ကို Binary form နဲ့ကြည့်ရင် 1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ရပါတယ်. Index နဲ့ပြရင် 2^24 ဖြစ်ပါတယ်. ဒီဂဏန်းက digit တစ်ခုတည်းနဲ့ တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်. 32-bit integer မှာ Maximum floating point က 16,777,216 ဖြစ်ပါတယ်. 32-bits System မှာ R epresentation လုပ်ကြည့်ရင်
exponent = 24 (store လုပ်ရင် 24+127=151=10010111)
32 bits floating-point representation:010010111 00000000000000000000000
Equation နဲ့ကြည့်ရင် Value = (+1) * 2^24 * (1.0 + .0) = 2^24 = 16777216
နောက်တစ်ဆင့် တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 16,777,217 (or) 2^24+1 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
Sign နဲ့ exponent တန်ဖိုးတူပါတယ်.
Mantissa တန်ဖိုးက 2^-24 အတိဖြစ်ရမယ်. Equation နဲ့ကြည့်ရင်
Value = (+1) * 2^24 * (1.0 + 2^-24) = 2^24 + 1 = 16777217
Mantissa တန်ဖိုးက 2-24 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ပြလို့မရတော့ပါဘူး. Mantissa က 23 bits ပဲရှိတာပါ. အဲတာကြောင့် Incrementing variable 16,777,217 ကို မပြနိုင်တော့ပဲနဲ့ break ဖြစ်သွားတာပါ. ဒါကတော့ သူတို့အသုံးပြုထားတဲ့ IEEE floating point limitation value ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆက်ပြီးတက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ programming ရေးတည်းက Maximum point အဖြစ် ဒီဂဏန်းကိုသတ်မှတ်ထားလို့သာဖြစ်ပါသည်။ မကာအိုမယ်လေး ဒီ ဂဏန်းမရောက်လာဖို့သာ ဆုတောင်းကြပါတော့မိတ်ဆွေများ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဥပဒေသည် လူတစု ကောင်းကျိုးအတွက် မဟုတ် .. လူထုကောင်းကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်နေရမည်။
by Lwin Aung Soe on Wednesday, October 17, 2012 at 11:06am ·
“တောင်းမှာ အကွပ်” ဆိုတဲ့အတိုင်း ရက်ထားတဲ့ အစတွေကို ပရမ်းပတာ မဖြစ်စေရအောင် အနားသတ်တွေကို ကွပ်ပေးထားရပါတယ်။ လူမှာလည်း သဘာဝအလျောက် စိတ်ရိုင်းဝင်လာတတ်တာကို မပြုမိစေဖို့ စည်းကမ်း၊ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ထိန်းကွပ်ထားရပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ မိသားစု စည်းကမ်း ထားရှိကြသလို ကျောင်းတွေ၊ အလုပ်ရုံတွေ၊ ရုံးတွေ၊ ဆေးရုံတွေမှာလည်း စည်းကမ်း ထားရှိရပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်း စည်းကမ်း ထားရှိပါတယ်။
လူမျိုးစုအလိုက်၊ လူမျိုးအလိုက် ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ စည်းကမ်းထားရှိပါတယ်။ လူမှုရေးမှာ ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန် စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်တွေ ရှိသလို ဘာသာရေးမှာလည်း စည်းကမ်း ကျင့်ဝတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဝိနည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို ပြဋ္ဌာန်း ကျင့်ကြံစေရပါတယ်။ အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း စည်းကမ်းနဲ့ပါပဲ။
နိုင်ငံအနေနဲ့ (Nationally) လူအများက မဖြစ်မနေ ပါဝင် ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပိုပြီး စည်းစနစ် ကျကျနနနဲ့ ထိရောက်စေဖို့ ဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပြိး ကျင့်သုံးကြရပါတယ်။
ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ မညီရခြင်းမှာ
ဥပဒေကို စတင်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ အတိတ်ကာလမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေအပေါ် သင်ခန်းစာယူပြီး လက်ရှိအခြေအနေ၊ နောင်လာလတ္တံ့သော အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေဖို့အပြင်၊ အကျိုးသက်ရောက်ပုံတွေကိုပါ အကျယ်ပြန့်ဆုံး မျှော်တွေး စဉ်းစား ချင့်ချိန်ပြီး ရေးဆွဲရပါတယ်။ လူတစု အကျိုးစီးပွားအတွက် မဖြစ်စေရဘဲ လူအများစု အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ဆန္ဒရှိရပါတယ်။ ဒီဥပဒေကို တရားဝင် ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုတာကလည်း လူသိထင်ရှား အသိအမှတ်ပြုပြီး ဖြစ်နေရပါတယ်။ ကောင်းသထက်ကောင်းစေဖို့ကိုသာ ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လည်း လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ပြင်ဆင် / ပယ်ဖျက်တာတွေ ရှိနေရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဘာဥပဒေကိုပဲ ပြဋ္ဌာန်းသည်ဖြစ်စေ ... “ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ မညီ” ဆိုတာတွေ နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်လာနေမှာပါပဲ။ ဒီအခါမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ မညီရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြန်လည်စိစစ် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
ဥပဒေ အသံကြားလျှင် ကြောက်နေကြခြင်း
မြန်မာတွေရဲ့ အစွဲတခုကတော့ ရုံးဂတ်တွေနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း မပတ်သက်ဘဲ နေချင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေလို့ အသံကြားရုံတင်နဲ့ ကြောက်လန့်တတ်သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဥပဒေ ဆိုတာ ကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်တာ မိသွားရင် ဖမ်းဆီး အပြစ်ပေးခံရမှာကို ကြောက်လန့်မိတာနဲ့ ဥပဒေ ဆိုတာကို တွေးကြောက်နေတတ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေ ဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့ ရဲနဲ့ တရားသူကြီးတွေရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ ပြုမူပြောဆိုပုံတွေကြောင့်လည်း အရပ်သားပြည်သူတွေမှာ ကြောက်လန့်၊ သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်လာတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ဥပဒေကသာ ပြည်သူတဦးချင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပြည်သူတွေအတွက် လူထု ပညာပေးရေးတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ပြီး အသိကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ လူခပ်များများမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ကြောက်စိတ်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူထု ယုံကြည် အားကိုးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အလျင်းသင့်တိုင်း အားပေးစကား ပြောဆို တိုက်တွန်းပေးနေရင် လူထုဟာ ဥပဒေအပေါ် ကြောက်လန့်နေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
နိုင်ငံရေးစနစ် မကောင်းတဲ့အခါမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရတွေက ဒီအချက်ကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ လူထုကို ဥပဒေအကြောင်း အမှန်အတိုင်း လူထုပညာပေးရေးတွေ လုပ်ပေးရမယ့်အစား ဝါဒဖြန့်အနေနဲ့ မီးလောင်ရာလေပင့် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ပိုဆိုးသွားတာကတော့ အမှု ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ လူထုဘက်က ခံဘက်ချည်းဖြစ်နေအောင် အစိုးရက တမင်တကာ ဖန်တီးယူတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အစစအရာရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ တရားဥပဒေ အမှန်တကယ် စိုးမိုးနေတာကြောင့် ပြည်သူတွေအတွက် စားစားသွားသွား ဘာလုပ်လုပ် အကြောက်တရား မရှိကြပါဘူး။ ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတာကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ ဒါကို ပိုပြီးသိလာတဲ့အခါမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု (Rule of Law) ကို ပိုမို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဥပဒေတွေကို သိပ်ပြီး အလိုရှိကြပါတယ်။ အလိုရှိကြတဲ့အတိုင်း ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာကြပါတယ်။ လိုနေသေးရင်လည်း ရဲရဲကြီး တောင်းဆိုတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတခုအတွင်းမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကြောင့် နိုင်ငံကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းက တည်ဆောက်ယူလာတဲ့ အနေအထား၊ လူတဦးချင်းကို ခလေးဘဝကနေ ပြုစုပျိုးထောင်ယူလာတဲ့ အနေအထားအလိုက် ဥပဒေကို လိုက်နာကြတဲ့အဆင့်မှာ နိုင်ငံအသီးသီးဟာ အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဥပဒေကို လိုက်နာသူ ရှိသလို မလိုက်နာသူလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အများစု ဖြစ်နေတတ်သလို အနည်းစုလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရတာတွေအပေါ်မှာ လူမှုရေး လေ့လာ သုံးသပ်ချက် စာတမ်းတွေက ဥပဒေကို ပိုမိုလိုက်နာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ လူတဦးချင်းကအစ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး လိုက်နာနေနိုင်တာမျိုး ဖြစ်ရပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံး.. တကမ္ဘာလုံးက တညီတညွတ် လက်ခံထားတဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေ ဖြစ်နေရပါတယ်။
ခလေးတယောက်ဟာ လူကြီးတယောက်လိုမျိုး စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာနိုင်စွမ်း မရှိသလို လောကုတ္တရာ ကျင့်ဝတ်တွေကို သာမန်လူသားတွေ ရေရှည် စောင့်ထိန်း လိုက်နာဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဓလေ့ထုံးစံတခုကို အသားကျနေသူအဖို့ အခြားဓလေ့တခုကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့ အစပိုင်းမှာ အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း (သို့) နိုင်ငံတခုအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြသူ အားလုံးအတွက် ညီညွတ်မျှတစွာ အကျိုးရှိစေနိုင်မယ့် ဥပဒေတရပ်ကို ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ လွယ်လင့်တကူ ပြီးပြီးရော ပေါ့ပေါ့ဆဆ မဆင်မခြင် ရေးဆွဲလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။
ဥပဒေကို မလိုက်နာသူ ပထမအမျိုးအစားဟာ အာဏာရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာရှင်ကို ဥပဒေ အထက်ကလူလို့ ပြောကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အာဏာရှင်နဲ့ ပေါင်းစားနေတဲ့ အာဏာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်း ဥပဒေရှိရက်နဲ့ မလိုက်နာကြပါဘူး။ တချို့အဖြစ်တွေမှာဆို ဥပဒေကို လူသိထင်ရှား ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ရဲတဲ့အထိ ကျူးလွန်တတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အာဏာကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာပါပဲ။
ဒုတိယ အမျိုးအစားဟာ တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေ ရှိမှန်းသိရက်နဲ့ မထီမဲ့မြင်လုပ်ပြီး ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုအရဖြစ်စေ၊ မတော်တဆကြောင့်ဖြစ်စေ.. ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကိုမှ ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် ဥပဒေကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတောင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စတဲ့ ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်မှုကို ထပ်မံကျူးလွန်တတ်ပြန်ပါတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်ရင် ထောင်နောက်ဖက်မှာ တံခါးပေါက်ရှိတယ် ဆိုတာ ဥပဒေကို ပျက်ရယ်ပြုထားတဲ့ စကားတခွန်းပါ။
တတိယ အမျိုးအစားကတော့ ဥပဒေကို နားမလည်လို့၊ မသိလို့၊ အရွယ်မရောက်သေးလို့၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းလို့ စတဲ့ ချွင်းချက် အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဥပဒေတွေကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်မိတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ သက်ညှာမှုနဲ့ ပြုပြင်ပေးနိုင်မှု အထိုက်အလျောက် ပေးထားရပါတယ်။
စတုတ္ထ အမျိုးအစားကတော့ မတရားတဲ့၊ မသင့်တော်တဲ့ ဥပဒေတွေကို အနည်းနဲ့အများ ဆန့်ကျင် အံတုသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ကို အလိုရှိကြတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
လိုရင်းကတော့ အခြားသူတွေ၊ အခြားအရာတွေကို ထိခိုက် နစ်နာတာမျိုး မရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားခွဲပြီး နည်းနည်း အကျယ်ချဲ့ကြည့်ပါမယ်။
(၁) လူတိုင်းရဲ့ အသက် ဘေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့၊ (ဥပမာ- သူခိုး ဓါးပြရန်၊ ရိုက်နှက် နှိပ်စက်ညှင်းပမ်း ခြိမ်းခြောက်မှု စသဖြင့်)
(၂) လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများနဲ့ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သွားလာတဲ့အခါ ဘေးရန်ကင်းကွာပြီး စနစ်တကျနဲ့ အဆင်ပြေစေနိုင်ဖို့ (ဥပမာ- စာချုပ်များ၊ ယာဉ်ဥပဒေ စသဖြင့်)
(၃) လူအများ နှစ်သက် သဘောကျ လက်ခံတဲ့ လူနေမှု အသိုင်းအဝိုင်းကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်ဖို့ (ဥပမာ - လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများ စသဖြင့်)
(၄) တရားမျှတမှုကို အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးစေနိုင်ဖို့
(၅) ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူတွေကို အရေးယူ အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ .. ဆိုပြီး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ကြီးလည်း ပြန်စပါတော့မယ်။ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးးပွားအတွက် ဥပဒေသစ်တွေ ပြဋ္ဌာန်းမယ့်ကိစ္စ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေထဲက ခေတ်စနစ်နဲ့ မလျော်ညီတာတွေကို ဖျက်သိမ်းမယ့် ကိစ္စတွေ၊ တည်ဆဲဥပဒေကို ခေတ်စနစ်နဲ့ လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မယ့် ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ရိုးသားဖြောင့်မတ် မှန်ကန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း အားပေးလိုက်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ ဥပဒေဘက်တော်သား အားလုံးတို့ကလည်း တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို တရားမျှတစွာ ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေပြီး ပြည်သူလူထု ထာဝရ ယုံကြည်အားကိုးနေရအောင် တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်နေပါမယ်။